Начало Конца | Cosmos koobi karayn
Laga bilaabo of cidhibtii
September 30-, 2017
Posted in gariirka . sharciga
Sidaas awgeed, waxaan helay in ay dhamaadka ah this xilligii ЛжИ iyo РаБоТоРгОвЛи, которая началась, ku saabsan 6000 sano ka hor. aragti, in waxaa ka dib doono, laakiin, sida muuqata, waxaa Waxaan go'aansaday inaan qaato hindisaha.
Just doonayay in la yidhaahdo, in waa Bilowgii dhamaadka ah.
Si kastaba ha ahaatee,, oo dhan, oo jeclaaday bannaan iyo kuwa, kuwaas oo la ilaaliyo iyo difaacaa uu danaha, galaan suurtagalka fiican adduunka. dhihi karo: ” si ay u Ilaah laabta”. Xitaa haddii ay “u ololeeya” waayo, idinku ma ogaan ama ka shakisan tahay.